ईनरुवा ६ मधेशामा सरप्राईज स्काई क्लवको सरसफाई अभियान -
ईनरुवा ६ मधेशामा सरप्राईज स्काई क्लवको सरसफाई अभियान
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १२, २०७५ समय: १३:२४:०१
झुम्का,श्रावण १२ । साबिक मधेशा गाबिस ८ र ३ हालको ईनरुवा नगरपालीका वडा नं. ६ को बाटो सरसफाई गरेको छ । पुर्ण सरसफाई अभियानकालागी सरप्राईज स्काई क्लवका युवाहरुले बाटो सरसफाई गरेको लिडर सुमन चौधरीले जानकारी दिए ।
सरसफाईकालागी बाटोघाटो छेउ कुलोमा रहेको अनावशयक उम्रेका झारपातहरु सामुहिक रुपमा सरसफाई गरेका हुन् । वडा कार्यालयको योजनामा रहेको सरसफाई कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै सरसफाई अभियान चलाएको प्रति वडा अध्यक्ष कोषराज अधिकारीले साह्राना ब्ष्क्त गरेका छन् । वडाका युवाहरुमा ब्यवहारीक बनाउन वल्र्ड भिजनको सहयोगमा युथक्रिएशन सुनसरीले गरीरहेको कार्य समृद्ध मुखि भएको भन्दै सरसफाईले वडा नं. ६ लाई पहिचान गराउने बताए ।
मानव स्वस्थय संग प्रत्यक्ष जोडिएकोहुदा घरआँगन बाटो सफा राख्नुपर्ने भएकोले सरसफाईमा जुटेको अर्का लिडर मनिषा श्रेष्ठले बताईन् । यो सरसफाई संगै मधेशालाई स्वच्छ ,सफा र सुन्दर वडा बनाउने अभियान अन्तर्ग गाउँटोलमा जनचेतनाका कार्यक्रमहरु पनि गरीरहेको लिडर श्रेष्ठले बताईन् ।